Rapid ကြိတ်စက် Shutter China Manufacturers & Suppliers & Factory
Rapid ကြိတ်စက် Shutter - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Rapid ကြိတ်စက် Shutter ထုတ်ကုန်များ)
တံခါးကို stacking မြန်နှုန်းမြင့်: အထူးမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကိုလှိမ့တံခါးများအတွက်အသုံးပြုမော်တော်: သုံးအဆင့် 380V; နှင့်တစ်ခုတည်းအဆင့် 220 V ကိုပါဝါ: 0.55-1.5KW, IP55 50 Hz ။ တံခါးကိုအရွက် 1.0 မီလီမီတာမြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆ polyester ဖိုင်ဘာသို့မဟုတ်ပြင်သစ်နိုင်ငံလုပ် 1.5 မီလီမီတာပွင့်လင်း PVC ပျော့စာရွက်။ တံခါးကို...
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဂိုဒေါင်-မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးသည်ကောင်းသော choince, ဒီတံခါးကိုအတူသငျသညျအကွောငျးကို warry folklift ဝင်တိုက်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘူး! ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်တွင်ကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး: အအေးအခန်း high-speed ကိုတံခါးများအဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန် applications များများတွင်အသုံးပြုတံခါးကိုစနစ်များ, ဖြစ်ကြသည်။...
Rapid ကြိတ်စက် Shutter Rapid PVC ကြိတ်စက် Shutter mega ကြိတ်စက် Shutter PVC ကြိတ်စက် Shutter overhead ကြိတ်စက် Shutter PVC Indutrial ကြိတ်စက် Shutter Rapid PVC ကြိတ်စက် Shutter တံခါး လိမ်ကြိတ်စက် Shutter